:Bọchị: February 2, 2020
Courtlọ ikpe nke Akaụntụ Relọ Ọrụ Ndekọ Ego na-ahụ maka oge a bụ otu n'ime ụkpụrụ nke Iwu cure nweta Ọha nke trambus, nke na-esiteghị na isi nke Şanlıurfa. kpughere na o megidere ụkpụrụ nke nghọta, asọmpi, ọgwụgwọ ha nhatanha, nzuzo na iji akụnụba rụọ ọrụ nke ọma [More ...]
Minister Turhan İyidere na-enyocha İkizdere Highway Work
Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, onye nyochara ụzọ Iyidere-Ikizdere, zutere ndị ahịa na ụmụ amaala na mpaghara Ikizdere mgbe e nwesịrị nzukọ na ebe a na-ewu okporo ụzọ metụtara ọrụ ndị na-aga n'ihu. Onye minista mere nkwupụta maka ndị nta akụkọ ebe a [More ...]
Kedu mgbe a ga-emeghee Ọdụ ụgbọ elu Rize Artvin?
Turhan, onye mere nyocha nke na-ewu Airportgbọelu Rize-Artvin, kwuru na ha nwere ohere iji hụ ihe omume na-aga n'ihu n'obodo ahụ na nleta ha n'ụbọchị. Inye ihe omuma banyere oru n'okporo uzo uzoidere-İkizdere, [More ...]
Mbọ Butt ahụ maka Bursa Northern Ring Motorway!
Nkwadebe maka mgbanwe nke uzo ya na ntinye aka nke Istanbul-Bursa-İzmir, nke onye oka iwu Nurhayat Altaca Kayışoğlu, onye otu ndi otu ndi otu PP Bursa nke omebe iwu na ndi isi oche nke nzuko omebe iwu. [More ...]
İmamoğlu, Pendik Kaynarca Tuzla Metro Construction Mmepe Echi na Pendik
Ekrem İmamoğlu na-abịa ebe a na-ewu Pendik maka imeghe okporo ụzọ Pendik Kaynarca Tuzla. Ọtụtụ aha ndị dị mkpa ga-aga ememe n'ehihie ma rụọ ụzọ ụgbọ oloko ahụ ga-agwụ na 2022. Obodo Obodo Istanbul [More ...]
Obodo Obodo nke Istanbul mere ka ọnụ ọgụgụ ụgbọ oloko dị na Line Kadıköy Moda Tram. N'ime ọtụtụ ọrụ nke ụbọchị, ndị njem na-ebu ike nke ahịrị, nke ụgbọ agha atọ na-eje, jiri ihe ruru pasent 3 mụbaa. N'etiti Kadıköy Moda [More ...]
Ala awara awara na Samsun Ordu Highway
Mgbe ala mbuzutere mere na Taşbaşı Mahallesi ebe dị n'okporo ụzọ mmiri Oké Osimiri Ojii, ndị isi obodo ahụ malitere ịrụ ọrụ nke ọma iji mepee ụzọ ahụ ozugbo enwere ike site na ịme mgba siri ike site na nkeji mbụ nke ihe ahụ merenụ. Otu, ala na [More ...]
Pendik Kaynarca Tuzla Metro Line Kwụsị
Pendik Kaynarca Tuzla metro akara nkwụsị na-ekerịta na weebụsaịtị nke ma Metro Istanbul na IMM. Ekpebisiri ike nkwụsị maka akara metro, nke Alsim Alarko na Cengiz ga-arụ. [More ...]
Taa na History: 2 February 1922 26 na Ankara na Disemba
Taa na History 2 February 1922 26 Mịnịsta ahia Kọmịshọna Gillespie, onye bịara Ankara na Disemba, degara Ngalaba Azụmaahịa US, na gọọmentị mba ahụ chọrọ ịmalite mmekọrịta azụmahịa na US ma chọọ enyemaka ego. [More ...]